September | 2008 | The World of Pinkgold
My "First Things"
Posted on September 25, 2008 by cuttiepinkgold
ပြောလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ကယ်က သေလောက်အောင် အလုပ်များနေတာ။ Miss People ပွဲ အတွက်လေ။ မနက်ဖြန်လည်း မန္တလေးကို သွားတော့မှာ ဆိုတော့ ပျားတုပ်ပြီး တိုင်ပတ်နေတယ်။ ဘိုဘို ကိုတောင် ပြောလိုက်သေးတယ် အောက်တိုဘာ 15 လောက်ထိ ငါမအားတော့ဘူး လို့။ ယောင်္ကျား မရလည်း နေပါစေတော့လို့။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ပဲ ချက်ချင်း ရေးဖြစ်သွားတယ်။ Designer တစ်ယောက်ရဲ့ Design ကို စောင့်နေတုန်း အချိန်လေး နည်းနည်းပိုနေတာနဲ့ ဒါကို ရေးဖြစ်သွားတယ်။ ဘိုဘို ကျွန်မကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ် tag လုပ်တဲ့ “ပထမဆုံးများ” ကို ရေးခွင့်ကြုံသွားတယ်။
ပထမဆုံး နေခဲ့တဲ့မြို့ — ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့ (မာန်အောင်ကျွန်း ပေါ်မှာရှိတယ်)
ပထမဆုံး တက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်း — အ.လ.က ဟင်းစနဲ (မာန်အောင်ကျွန်းပေါ်မှာပဲ)
ပထမဆုံး အတန်း — ပထမတန်း (တစ်ကယ်က 88 တုန်းက လေးနှစ်လေ။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် သူငယ်တန်း စတက်မယ်ဆိုပြီး အဖေက စာတွေ အကုန်သင်ထားတာ၊ ကျောင်းလည်း ဖွင့်ရော သူငယ်တန်းမှာ တစ်ယေက်တည်း ထူးပြီး ချွန်နေလို့တဲ့ ဆရာတွေက ရှုပ်တယ် ဒီကလေးဆိုပြီး ပထမတန်း တင်လိုက်တာ။ အဲဒါကြေင့် အသက် ငယ်ငယ်နဲ့ 10 တန်းကို 99 မှာ အောင်လာတာပေါ့။ တစ်ကယ်က 2000 မှာမှ အောင်ရမှာ)
ပထမဆုံး သူငယ်ချင်း – ထွန်းထွန်းဝင်းနိုင်တဲ့ ( ရွကပဲ.. ကျွန်မကို မွေးတဲ့ ရွာက.. ကျွန်မတို့ကတော့ သံခဲ လို့ခေါ်တယ်)
ပထမဆုံး ရတဲ့ ကျောင်းသူငယ်ချင်း — အောင်အောင် ( တော်တော် ခင်ကြတယ်.. ခုတော့ ဘယ်ရောက်နေလဲ သိဘူး.. မာန်အောင်မှာပဲ ထင်တယ်၊ သူငယ်တန်းစတက်တော့ သူနဲ့အရင် စသိတာ၊ သူကပဲ ကျောင်းနေမပျော်တဲ့ ကျွန်မကို ပျော်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာ)
ပထမဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ် — ကျောင်းစာအုပ်လား၊ တစ်ခြား စာအုပ်လား (ကျောင်းစာအုပ်ဆိုရင်တော့ သူငယ်တန်းစာအုပ်ပေါ့၊ တစ်ခြား အပြင်စာအုပ်ဆိုရင်တော့ မင်္ဂလာမောင်မယ် မဂ္ဂဇင်း .. ငယ်ငယ်တုန်းက လစဉ်ဖတ်တယ်)
ပထမဆုံး အလွတ်ရတဲ့ ကျောင်းစာ — က၊ ခ၊ ဂ။ ကျောင်းမတက်ခင်ကတည်းက အိမ်ကလူကြီးတွေက ကြိုသင်ပေးနေတာလေ။
ပထမဆုံး အရိုက်ခံရခြင်း — မမှတ်မိတော့ဘူး၊ အကျင့်ကလည်း ပုတ်တဲ့အပြင်၊ ဆိုးလည်းဆိုးလို့ အဖေက ခဏ ခဏ ရိုက်တယ်
ပထမဆုံး ရတဲ့ဆု — ပထမဆု (ကြွားအုံးမယ်.. သူငယ်တန်းကနေ ကိုးတန်းထိ ပထမဆုပဲ ရတာ.. 10 တန်းရောက်တော့လည်း ကိုယ့်မြို့နယ်မှာ ပထမ ပါပဲ)
ပထမဆုံး သွားဖူးတဲ့ခရီး — မာန်အောင်ကနေ ရန်ကုန်ကိုလာတာ (2001 ခုနှစ်မှာပေါ့)
ပထမဆုံး စီးဖူးတဲ့ကား — ကျွန်မတို့ဆီမှာ လိုင်းဆွဲတဲ့ ဒိုင်နာကား (အမျိုးတွေရှိတဲ့ ရွာကို သွားလည်ရင်း စီးဖူးတာ)
ပထမဆုံး ဆိုတဲ့သီချင်း — ဘလက်အိုင် ဆူးဇင်၊ ဘလက်အိုင်ဆူးဇင်၊ ဟောင်းအာယူ၊ ဟောင်းအာယူရ်၊ ဗဲရီးဝဲလ် အ်ိုင် သင့်ခယူ၊ ဗဲရီးဝဲလ် အ်ိုင် သင့်ခယူ၊ ဟောင်းအာယူ၊ ဟောင်းအာယူ။
ပထမဆုံး ရေးတဲ့ကဗျာ — ကဗျာနာမည်က “ဆန္ဒ” တဲ့.. စာသားလေးက
“It’s my desire,
Parting from you never,
Living with you together”
အဲဒီ ကဗျာကို The Best English မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရတယ်။ ကြွားတာ ဟဲဟဲ
ပထမဆုံး ရေးခဲ့သော ရည်းစားစာ — ရေးဖူး သေး ဘူး ရှင့်။
ပထမဆုံး ရည်းစားထားခဲ့ဖူးသောနှစ် — မရှိပါဘူးဆိုနော်
ပထမဆုံး ချစ်သူ — သြော် ကဲ ပြော ပြီး ပါ ပြီ ကော၊ ရှိသေးပါဘူးဆို။
ပထမဆုံး ၀ယ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် — ကောင်းသန့် (သမီးလေး ဖတ်ဖို့)
ပထမဆုံး ၀ယ်တဲ့သီချင်းခွေ — အေးချမ်းမေရဲ့ တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ်
ပထမဆုံး တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့နေ့ — နေ့တော့မသိတော့ဘူး။ ခုနှစ်တော့သိတယ်။ ၂၀၀၁ မှာတက္ကသိုလ် စတက်တာ။
ပထမဆုံး ရဖူးတဲ့လက်ဆောင် — မမှတ်မိတော့ဘူး
ပထမဆုံး အလုပ် — Blazon မှာ Purchaser လုပ်တာ
ပထမဆုံး တစ်ယောက်ထဲခရီးသွားခြင်း — Second Year တုန်းက ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်တဲ့ အချိန် (ရန်ကုန်ကနေ မာန်အောင်ကို သွားတာ အဝေးကြီးပဲ.. မှတ်မိသေးတယ် အဲတုန်းက တော်တော်ကြောက်နေတယ်. ကားပေါ်မှလည်း အသိတွေ မပါလို့)
ပထမဆုံး သောက်ဖူးတဲ့ဆေးလိပ်၊ ပထမဆုံး သောက်ဖူးတဲ့အရက် — အတော်ရိုးတဲ့ မယ်ပင့်ဂိုလ်းပါရှင်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်တတ်ဝူး
ပထမဆုံး တက်ဖူးသော ဆေးရုံ — နေမကောင်းတွေ ဟဲဗီးဖြစ်ပေမယ့် ဆေးရုံဘယ်တော့မှ မတက်ဘူး။ အသက် တစ်နှစ်လောက်တုန်းကတော့ ညဘက်ကြီး အပြင်းဖျားလို့ ရွာကနေ မြို့ပေါ်က ဆေးရုံကို ပြေးရဖူးတယ်လို့ အဖေကပြောတယ် (မာန်အောင် မြို့နယ် ဆေးရုံပေါ့)
ပထမဆုံး ဘလော့ပို့စ် — The Value of Smile
ပထမဆုံး ခင်တဲ့ ဘလောဂ့်မိတ်ဆွေ — မြန်မာတီးရှောပ့် ဖိုရမ်ကနေ ဘလောဂ့်ဂါတွေ အများကြီးနဲ့ ခင်လာတာ ဆိုတော့ ပထမဆုံးဆိုတာ ပြောဖို့ ခက်တယ်။ ပထမဆုံး အခင်ဆုံး ဘလောဂ့်မိတ်ဆွေဆိုရင်တော့ ကိုထိုက် ပေါ့
ပထမဆုံး ကိုယ်ရှာတဲ့ပိုက်ဆံကိုယ်သုံးခြင်း — 10 တန်းပြီးလို့ Guide ပြန်လုပ်တဲ့ အချိန်
ပထမဆုံး အကြိမ် ရန်ဖြစ်ခြင်း —2တန်းတုန်းကထင်တယ်။ အတန်းထဲက တစ်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်တာ၊ စာမေးပွဲဖြေတုန်း ကျွန်မဆီက စာခိုးချလို့ ဆိုပြီးတော့
ပထမဆုံး အကြိမ် ထီပေါက်ခြင်း — (2) လုံးထီစပေါက်တာ.. ကိုယ့်ဟာကိုယ် ခံစား မိတဲ့ 63 ဆိုတာလေးကို မ၀ံ့မရဲ ထိုးလိုက်တုန်းက (50 ဖိုးပေါက်တာကွ ဘာမှတ်လဲ ဟွန်း ဟွန်း)
ပထမဆုံး ရင်ခုန်ဖူးခြင်း — မွေးကတည်းက ရင်ခုန်လာတာလေ.. ဟုတ်ဘူးလား
ပထမဆုံး တီးဖူးတဲ့ဂစ်တာ — မတီးတတ်ပါ (တူရိယာ ဆိုလို့ ၀ါးလက်ခုတ်ပဲ တီးတတ်တယ်)
ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံရပ်ခြား — နယ်စပ်တောင် မရောက်ဖူးဘူး။
ကျွန်မလည်း ထပ် tag မယ်။ လာထား.. ကိုသင်ကာ၊ ကိုသီဟန်၊ ကိုထွန်းတောက်နေ၊ ကိုကောင်းကင်ကို၊ ခိုင်သဉ္ဖာ၊ စည်သူ တို့ကို တက်ပါတယ်။ ရေးပေးကြပါ၊ ရေးပေးကြပါ။
Filed under Tag |	5 Comments
Present for Love!
Posted on September 22, 2008 by cuttiepinkgold
♥ချစ်သူနှစ်ဦး ၏ အပြန်အလှန် လက်ဆောင် ပေးတက်စေဖို့♥
( ကိုယ့်ကို အမြဲ သတိရနေပါ )
အလှစိုက်သစ်ပင် ———- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဦးထုပ် ———- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်အောင် ဆုတောင်းပေးနေမယ် )
စက္ကူ ကြိုးကြာရုပ် တစ်ထောင် —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
စက္ကူ ရောင်စုံ ကြယ်ပွင့် တစ်ထောင်——– မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(ကိုယ့်ကိုမေ့လိုက်ပါတော့ = ချစ်သူအဖြစ်မှ ပြတ်စဲ လိုသည့်အခါ )
မီးခြစ် —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ပြာခွက် —- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
( အနေဝေးလို့ မေ့မသွားနဲ့နော် = ရက်လရှည်များခွဲခွါရရင် )
ဒိုင်ယာရီစာအုပ် —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဘောလ်ပင် —– မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(ဂုဏ်ယူပါတယ် =ချစ်သူ၏ အောင်မြင်မှု့ တစ်ခု အတွက် )
ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်လှလှလေး —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
၀ိုင်ပုလင်း —– မိန်းကလေးမှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(လွမ်းခဲ့ရသမျှ မေ့ပစ်ကြစို့ =ငိုကြွေးခဲ့သော ကာလ များ ပြီးဆုံးပြီ )
လက်ကိုင်ပုဝါ —– ယောကျာင်္းလေးမှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
စားပွဲတင်ပြက္ခတိန် —– မိန်းကလေး မှယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(ချစ်သူကိုစိတ်ဆိုးပြေအောင်ချော့တဲ့ အခါ )
အ၀ါရောင်ပန်းပွင့် ပန်းစည်း —-ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
သီချင်းဓာတ်ပြာ အယ်ဘမ်—– မိန်းကလေးမှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
(ကွယ်ရာမှာ သစ္စာမ ဖောက်နဲ့နော် )
ကြည့်မှန်သေး —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
သော့ချိတ်လေး —– မိန်းကလေးမှယောကျာင်္လေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
( လက်ထပ်ချင်ပြီ )
လက်စွပ်တစ်ကွင်း —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
လက်ပတ်နာရီ —– မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
( ကိုယ့်ကို သစ္စာမဲ့တယ်လို့ အထင်မလွဲပါနဲ့ )
နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးဆေး—– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
အင်္ကျီ အ၀တ်အစား —–မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လကိဆောင်ပေးရန်
(တို့နှစ်ယောက် အချစ် တည်တံ့ခိုင်မြဲ ပါစေ )
ဖဲ ကြိုးလှလှလေးချည်ထားတဲ့ပန်းစည်း —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ချောကလက်ဘူး —– မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
( ချစ်တာကို ဖွင့်ပြောဖို့ မ၀င့်မရဲဖြစ်နေရင် )
အမွှေးပွပွ ၀က်ဝံရုပ် —– ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့လက်ဆောင်ပေးရန်
ရေမွှေး ပုလင်း —– မိန်းကလေး မှယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဒါလေးကို ဖတ်ပြီ: သူငယ်ချင်း အပေါင်းတို့လည်း ချစ်သူနဲ့
အစဉ်ပြေချောမွေ့ပါစေ လို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်
ကျွန်မ ဒါလေးကို ဖတ်ဖူးတာ ၀တ္ထုစာအုပ် တစ်ခုထဲမှာပဲရှင့်.. တာရာမင်းဝေ ရေးတာလား၊ မင်းခိုက်စိုးစံ ရေးတာလား သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ခုတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယေက်က မေလ်းပို့လာတာနဲ့ ကျွန်မလည်း အမှတ်ရပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Filed under Love Story |	2 Comments
Miss People Style Competition and Me!
Miss People ဆိုတာ စတိုင်လ်ကိုဦးစားပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စတိုင်လ်မိုက်တဲ့ အချောအလှလေးတွေကို မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ နာမည်ကြီးကျော်ကြားစေဖို့ People Magazine ကဖော်ထုတ်ပေးမယ့်ပွဲတစ်ခုပါ။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Stylist အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မော်ဒယ်လ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်မော်ဒယ်လ်လုပ်ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်လ်ကိုအသားပေးလို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Miss People ပြိုင်ပွဲကြီးကို 2006ခုနှစ်လောက်မှစပြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲကျင်းပခဲ့တာ အခုဆိုရင် သုံးနှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ 2006 ခုနှစ်ရဲ့ Miss People ရွေးချယ်ပွဲကိုတော့ Traders Hotel မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 2007 ခုနှစ်မှာတော့ The Strand မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Miss People Style Competition မှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆုများရရှိခဲ့ကြသော မော်ဒယ်လ်တွေဟာလည်း ယခုအချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော မော်ဒယ်လ်များအဖြစ် မော်ဒယ်လ်လောကမှာ ရည်တည်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ People Magazine ရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် Miss People 2008 ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး မြို့များမှာ တခမ်းတနား ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စတိုင်လ် အမိုက်ဆုံး၊ အချောဆုံး၊ အဖြောင့်ဆုံး မဒီလေးများကို မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ ကျော်ကြားသွားအောင် People Magazine မှ ဖော်ထုတ် ပေးလိုပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေကလိုပဲ ဖက်ရှင်နဲ့ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေဟာ Stylist အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မော်ဒယ်လ်နဲ့ ပေါင်းပြီး အဖွဲ့လိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင် မော်ဒယ်လ် လုပ်ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရှင်နဲ့ စတိုင်လ်ကို အသားပေးလို့ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းဟာ ဒီပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပခံစားတတ်တဲ့၊ ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေအားလုံး လာလို့ရအောင် ပွဲဝင်ကြေးကို မသတ်မှတ်ပဲ အခမဲ့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားလောက်အောင် ထူးခြားရင်ခုန်စေမယ့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်ပရိတ်သတ်အားလုံး ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ Miss People ရွေးချယ်ပွဲ ဆိုတာနဲ့ ရင်းနှီးနေတာ 2006 ကတည်းကပေါ့။ အဲဒီတုန်းကတော့ People Magazine က ကြီးမှူးပြီး လုပ်တဲ့ ဒီပွဲကြီးကို ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ သွားအားပေးခဲ့တယ်လေ။ Traders Hotel မှာ တစ်ခြားပွဲ တွေနဲStage အပြင်အဆင်ဋ္ဌ၊ အံ့မခန်းလောက်တဲ့ ပရိတ်သတ်အင်အား၊ လာပြိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စတိုင်လ် အမိုက်စားလေးတွေကို ငေးကြည့်ခဲ့ရတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပွဲကြီးပါလားလို့လည်း မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ အနုပညာရှင်တွေ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးတွေ၊ တစ်ခြား နာမည်ကြီး မော်ဒယ်လ်တွေ တော်တော်များများနဲ့ အတော်လေးကို စည်ကားတဲ့ ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီပွဲက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေကလည်း နာမည်ကြီးသွားချည်းပဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကော၊ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပါ ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ပွဲမို့လို့ 2006 မှာကတည်းက ကျွန်မဒီပွဲကြည့်ရတာကို နှစ်ခြိုက်ခဲ့တယ်။
2007 ကိုရောက်လာတော့ ကျွန်မပါဝင်ဆင်နွှဲပုံက တစ်မျိုးရှင့်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မက TONI&GUY မှာ Brand Executive တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာလေ။ Miss People 2007 ပြိုင်ပွဲမှာ စပွန်စာ ပေးခဲ့လို့ VIP တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီပွဲကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက Miss People ပွဲကို The Strand Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်။ 2007 တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲကတော့ ကျွန်မမှတ်မိသလောက် သိပ်အဆင်ပြေလှတဲ့ ပွဲမဟုတ်ဘူးရှင့်။ ပွဲကို သတ်မှတ်ချိန်မှာ မစတင်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ Lighting Sound System တွေ မကောင်းဘူး။ Presenter ဖြစ်တဲ့ သဇင်နဲ့ ညီနန္ဒ စကားပြောတာ အချိုးမပြေဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှအပ၊ တစ်ခြား ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေကြားမှာ ဒါတွေဟာလည်း ပြောစရာ မဖြစ်တော့ဘူး။ အရမ်းတော်တဲ့ Dancer တွေ၊ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ လှပမှုတွေကြောင့် အဆင်မပြေမှုတွေဟာ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဟော ခု Miss People 2008 Style Competition ကြီးကို ရန်ကုန်မှာသာမက၊ မန္တလေးမှာပါ ပြုလုပ်တော့မယ်။ ဒီတစ်ခါ ပွဲအတွက် ကျွန်မ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မဟာ ပွဲ Organizer တွေထဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ People Magazine ကိုမွေးဖွားပေးရာ Inforithm-Maze Co.Ltd မှာ အလုပ်ဝငိခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ခုတော့ Miss People ပွဲရဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာတစ်ခုကနေ ပါဝင်စီမံနေရပြီလေ။ Miss People နဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရေစက်ကတော့ ကုန်ပဲ မကုန်နိုင်ပါလားရှင်။ ထူးခြားတဲ့ ရေစက်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ စက်တင်ဘာလ 28 ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ Hotel Mandalay မှာ Miss People Mandalay ရွေးချယ်ပွဲကို ကျွန်မတို့ သွားရောက်ပြုလုပ်ရတော့မယ်၊ တဖန် အောက်တိုဘာက (11) ရက်နေ့၊ စနေနေ့မှာ ရန်ကုန်က The Strand Hotel မှာ Miss People Yangon ရွေးချယ်ပွဲအတွက် ပြန်လည်းစီမံရအုံးမယ်။
ဒီပွဲအတွက် ကျွန်မတို့ရုံးက ၀န်ထမ်းတွေ အကုန်လုံးနီးပါး အလုပ်တွေ တော်တော်များခဲ့ရတယ်။ သူများထက် ထူးခြားအောင်၊ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေအောင် Idea တွေ မွေးထုတ်ခဲ့ရတယ်၊ Meeting ပေါင်းမြောက်များစွာကို နေ့လည်စာလွတ် ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေကလည်း မနည်းတော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်မတို့ အတွက် ရင်ခုန်ရမယ့် နေ့လည်း မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ်။ ကျွန်မလည်း 26 ရက်နေ့ မှာ ရုံးအဖွဲ့နဲ့ မန္တလေးတက်ပြီး စီစဉ်စရာတွေ စီစဉ်ရတော့မယ်။ ဒီမတိုင်ခင်3လအလိုလောက်ကတည်းကလည်း တစ်လ တစ်ခေါက် မန္တလေးသွားပြီး လုပ်စရာတွေကို လေ့လာပြီး လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ တစ်ကယ်လုပ်ရတော့မယ်၊ အားလုံး အဆင်ပြေဖို့ မျှော်လင့်တယ်၊ ကြိုးစားခဲ့တာတွေ အောင်မြင်ဖို့ကို မြင်ယောင်မိတယ်။ People အဖွဲ့သားတွေ အကုန်လုံးရဲ့ အစွမ်းအစကို ဒီပွဲမှာ ချပြကြမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မလေ ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Miss People 2008 ဟာ မန္တလေးအတွက်၊ ကျွန်မအတွက် ပျော်ရွှင်မှုလေး တစ်ခုလောက်တော့ ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ယူထားလို့ပါပဲ။
Winners of Miss People 2006
Miss Style – Aye Myat Thu (She is now at the leading role in Myanmar Model Society)
Miss People – M. Khar Yar
Miss Charming – Zin Sandar Htun
Best Stylist – Su Su Aung
Jar San – Miss People
Chan Chan – 1st Runner Up and People’s Choice (Now she is very popular both asamodel andasinger)
Soe Pyae Pyae San – Second Runner Up ( She is now alsoapopular Model in Myanmar)
Miss People 2008 တွေဟာ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ၊ သူတို့တွေဟာ မော်ဒယ်လ်လောကမှ ဘယ်လို အောင်မြင်လာမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မတို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ရှင်။
Miss People Mandalay
– Hotel Mandalay
– Free Entrance (ကြိုတင်လက်မှတ်ယူပါ)
Miss People Yangon
– The Strand Hotel
– Free Entrance (ကြိုတင်လက်မှတ် ယူပါ)
Miss People 2008 Official Website ကိုတော့ ဒီနေရာလေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
Filed under Miss People |	4 Comments
A New Quotable Woman
Posted on September 14, 2008 by cuttiepinkgold
ခုတစ်လော ကျွန်မလည်း ဦးတင့်ပြောသလို ကံနိမ့်နေတယ်ထင်တယ်။ ပြောလိုက်သမျှ၊ ရေးလိုက်သမျှတွေက အနှောင့်အသွားကို မလွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ တမင်တကာ ရည်ရွယ်တာလည်း မဟုတ်ရပါပဲနဲ့ လူပြောသူပြော များချင်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်း အတွေးအခေါ်တွေ အမြင်တွေ မတူနိုင်ကြတော့ ပဋိပက္ခတွေများကြတာလည်း ဆန်းတော့ မဆန်းပါဘူးလေ။ ထားပါတော့။ ကျွန်မ မနေ့က စာအုပ်ဆိုင်မှာ ၀င်မွှေရင်း မှတ်မှတ်သားသား မိန်းမတို့ ပြောသောစကားဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို တွေ့တော့ သဘောကျပြီး ၀ယ်လာမိတယ်ရှင့်။ အဲဒီထဲက တစ်ချို့စာသားလေးတွေကို ကြိုက်တာနဲ့ ဒီမှာပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
နောက်ခုံမြင့် ဖိနပ်တွေသာ အံ့သြစရာ ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ပုရိသတွေ စီးနေကြဦးမှာပဲ။
(ဆူး ဂရပ်ဖ်တန် – အမေရိကန် စာရေးဆရာမ)
မိမိရဲ့ နဖူးထက်မှာ အတွန့်တွေ အရေးကြောင်းတွေ ထင်ချင်ထင်နေပါစေ၊ နှလုံးသားပေဓမှာတော့ အရေးကြောင်းတွေ မထင်စေနဲ့၊ စိတ်ဓါတ်ကို အိုမင်းရင့်ရော် မသွားပါစေနဲ့။
(တယ်လင် ရိုလင် )
အသက်ဘယ်လောက်ကြီးပြီဆိုတာ အရေးမကြီးဘူး၊ ဘယ်လိုအသက်ကြီးနေလဲဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။
(မေရီ ဒရက်ဆလာ – အမေရိကန် အသံတိတ်ရုပ်ရှင် မင်းသမီး)
လှပတဲ့ မိန်းကလေးတွေအကြောင်းပဲ ပြောခဲ့ကြတယ်၊ တေးဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်၊ အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှကို စာဖွဲ့ဖို့ စိတ်ကူးမရကြဘူးလား။
(ဟာရိယက် ဘီချာစတိုဗီ – အမေရိကန် ငွေဝယ်ကျွန် ပပျောက်ရေး စာရးဆရာမကြီး)
နိုင်ငံရေးလောကမှာ တစ်ခုခုပြောချင်ရင် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို သွားမေးပါ၊ တစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မေးပေတော့။
(မာဂရက် သက်ချာ – ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
ဘ၀ဆိုနာ စွန့်စားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် ဆန္ဒ တိုက်ပွဲတစ်ရပ် ဖြစ်သင့်တယ်။ အဲဒီစွန့်စားမှုတွေရဲ့ မြင့်မြတ်မှုဟာ ၀ိညာဉ်ခွန်အားကို ဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။
(ရီဘက်ကာ ၀က်စ် – အိုင်းရစ်စာရေးဆရာနှင့် သတင်းစာ ဆရာမ)
သူရဲကောင်းကြီးတွှေ နိုင်ငံရေး သုခမိန်ကြီးတွေ၊ ဒသနပညာရှင်ကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဥာဏ်ပညာဖြင့် ပြည့်စုံသော အမျိုးသမီးများ ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။
(အာဘီဂေး အဒမ်းစ် – အမေရိကန် သမတ ကတော်ဟောင်း)
အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ပညာသင်ပေးခြင်းသည် အိမ်ထောင်စု တစ်စုအား ပညာသင်ပေးလိုက် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(ဂျီဗီတာ အီတာ – အမေရိကန် သတင်းစာဆရာမ)
ဆက်ပါဦးမယ်ရှင်။ အဲဒီစကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြိစရာပါတယ် ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ လူတွေကိုပဲ ပြသနာ သွားရှာလိုက်ကြပါတော့ နော်။
Filed under General Knowledge |	13 Comments
Posted on September 4, 2008 by cuttiepinkgold
ခုတစ်လော ကျွန်မ ဘလောဂ့်မှာ တော်တော် သောင်းကျန်းခြင်းခံနေရတယ်။ စီမီနာမလုပ်ဖြစ်တာ သတင်းမှားကြောင်းလေး ဖြေရှင်းချက် တင်မိပါတယ်.. ဟိုဘက် ဒီဘက် ဘက်တော်သားများရဲ့ သူတို့အချင်းချင်း ထုထောင်းဖို့Pinkgold စစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားတယ်။ တော်တော်လည်း စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ဒီတော့ လူတွေကိုလည်း အာရုံပြောင်းအောင်၊ ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာအောင် ဆယ်တန်းတို့ First Year တို့တုန်းက အသေလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရေးပေးပါ ဆိုတာလေးကို အောင်မျိုးဟန်နဲ့ ကိုသီဟန်က တက်လို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် ………… Pink Gold (နာမည်တွေသိချင်ရင် Me and My Names ကိုဖတ်)
ကိုယ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ………… လာပါအုံး
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်………… ရန်ကုန်မှာလေ တိုက်ခန်းငှားနေတယ်
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်………… Nokia နဲ့ပဲ ဆက်နော်
အရောင်ဆိုရင်……………… ဖြူ၊ ပြာ၊ နက်
အ၀တ်အစားဆိုရင်………… ဂျင်းဘောင်းဘီ အတို၊ အရှည်၊ ကွာတား၊ ဒူးလောက်၊ ပေါင်လောက် အကုန်ဝတ်
သီချင်းဆိုရင်……………….. Hip Hop/ R & B/ Pop
စာရေးစာဆရာ……………… တော်တော်များများ ကြိုက်ပါတယ်
Life style………………….. လူတွေ လေးစား၊ အားကျရတဲ့ ဘ၀
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ……………… စာဖတ်တာ၊ သီချင်းဆိုတာ အာပလာရိုက်တာ
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်………… HP Laptop၊ ဘဘောဂ့်ဂါ အကိုကြီး တစ်ယောက်က ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ ဖက်လို့လည်းရ.. ခွလို့လည်းရတဲ့ အရုပ်အကြီးကြီး (ဟဲဟဲ)
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက………… အချစ်ဆုံး "သူ"
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက………… အဖေနဲ့ အမေ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက………… ထိုင်းမှာလေ၊ ABAC မှာ ကျောင်းတက်နေတယ်
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက………… မရှိသေးဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက………… အမုန်းဆုံးသူ မရှိသေးဘူး
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်………… ရင်မခုန်ရင် သေသွားမှာပေါ့
အကြောက်ဆုံးအချိန်………… မဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်
အပျော်ဆုံးအချိန်………… ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု အောင်မြင်သွားတဲ့ အချိန်
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု………… အိုဘားမားနဲ့ ညားပါစေ
အချစ်ဆိုတာ………… ထိ၊ ခိုက် ရှ လွယ်တဲ့ ခံစားချက်
အမုန်းဆိုတာ………… မရှိတာ ကောင်းတယ်
သံယောဇဉ်ဆိုတာ………… သံတွေရောထားတဲ့ တံစဉ်း
ဘ၀ဆိုတာ………… ဘ ရေ ဘ.. ၀ ရေ ၀
သူငယ်ချင်းဆိုတာ………… ပေါဖော် ပေါဖက်
ချစ်သူဆိုတာ………… ချစ်ရတဲ့ "သူ"
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်………… ရုပ်ချော၊ သဘောကောင်း၊ တော်လည်းတော်
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း………… ပြောရင်ကော လိုက်လုပ်ကြမှာ မို့လို့လား..
ကဲ… ကျေနပ်တော့ အောင်မျိုးဟန်နဲ့ ကိုသီဟန်ရေ။